प्रिमियर लिग : शेफिल्ड युनाइटेडले वेष्ट हामलाई हरायो
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत शेफिल्ड युनाइटेडले जित निकालेको छ । शुक्रबार राति सम्पन्न खेलमा शेफिल्डले वेष्ट हाम युनाइटेडलाई १-० गोलले पराजित गरेको हो ।
पेपे रैना प्रिमियर लिग क्लबमा फर्कने !
एजेन्सी । स्पेनिस गोलकिपर पेपे रैना प्रिमियर लिग क्लब फर्कनसक्ने भएका छन् । हाल इटालियन क्लब एसी मिलानमा रहेको ३७ वर्षीय रैनालाई एस्टन भिलाले भित्र्याउन लागेको हो ।
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा लिगलिडर लिभरपुलले जित निकालेको छ । बिहिबार राति सम्पन्न खेलमा लिभरपुलले आफ्नै घरेलु मैदान एनफिल्डमा शेफिल्ड युनाइटेडलाई २–० गोलले पराजित गरेको हो ।
प्रिमियर लिगमा आज यी ९ खेलहरु हुँदै
एजेन्सी । सन् २०२० को पहिलो दिन आज इंग्लिस प्रिमियर लिगमा ९ खेलहरु हुँदैछ । आज लिभरपुल र सेफिल्ड युनाइटेडबाहेक सबै खेल हुन लागेको हो । आजको लागि सबै खेल महत्वपूर्ण भए पनि आर्सनल र म्यान्चेस्टर युनाइटेडबीचको खेल विशेष हुनेछ । यो खेल राति १ः४५ बजे आर्सनलको घरेलु मैदानमा हुनेछ ।
म्यान्चेस्टर युनाइटेडद्वारा बर्नले पराजित
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत म्यान्चेस्टर युनाइटेडले जित निकालेको छ । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बर्नलेलाई २–० गोलले पराजित गरेको हो ।
टोटेनहम नर्वीच सिटीसँग बराबरीमा रोकियो
एजन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटेनहम बराबरीमा रोकिएको छ । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा टोटेनहमले नर्वीच सिटीसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको हो ।
प्रिमियर लिगमा आज कुन–कुन खेल हुँदैछ ?
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत आज शनिबार ६ खेल हुँदैछ । २० औं म्याचविक अन्तर्गत पहिलो खेलमा ब्राइटनले बर्नमाउथको सामना गर्दैछ । आज हुने प्रिमियर लिगको सम्पूर्ण तालिका यसप्रकार रहेको छ ।
अग्रता जोगाउन नसक्दा म्यान्चेस्टर सिटी वुल्भ्ससँग पराजित
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी पराजित भएको छ । शुक्रबार राति सम्पन्न खेलमा सिटी वुल्भ्ससँग ३–२ गोलले पराजित भएको हो ।
प्रिमियर लिगमा लिभरपुलको शनशनीपूर्ण प्रदर्शन
काठमाडौँ । इंग्लिस क्लब लिभरपुलले घरेलु लिग प्रिमियर लिगमा शनशनीपूर्ण प्रदर्शनको क्रम जारी राखेको छ । बिहीबार राति सम्पन्न ‘बक्सिङ डे’को खेलमा लिभरपुलले अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको क्लब लेस्टर सिटीलाई उसैको घरेलु मैदान किङ्ग पावरमा ४–० गोलले हरायो ।
म्यान्चेस्टर युनाइटेडले न्युक्यासल युनाइटेडलाई हरायो
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले सानदार जित निकालेको छ । बिहिबार राति सम्पन्न खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले न्युक्यासल युनाइटेडलाई ४–१ गोलले पराजित गरेको हो ।